Rio Ferdinand Oo Sharraxaad Ka Bixiyay Bandhigyada Maguire Ee Xulka Saddexda Libaax – Garsoore Sports
Rio Ferdinand Oo…
Halyeeyga Manchester United Rio Ferdinand ayaa amaan kala dul dhacay daafac Harry Maguire isagoo sharraxaad ka bixiyay xiddigan kaddib bandhig kale oo cajiib ah oo uu u sameeyay Xulkiisa Ingiriiska tartanka Qaramada Yurub.
Maguire ayaa dhaawac ku seegay labadii kulan ee furitaanka ee Ingiriiska, waxaana uu soo bandhigay qaab-cayaareed aad u wanaagsan seddexdii kulan ee uu ciyaaray tan iyo markii uu soo laabtay. Isagoo sidoo kale furay akoonkiisa gooldhalinta tartanka kaddib madax xoog badan oo uu shabaqa ku hubsaday billoowgii qeybtii labaad ee quarter-final-kii ay 4:0 ku dardareen xulka Ukraine.
Daaficii hore ee kooxda Red Devils oo isagoo cayaarta ka falanqeeynaya Telefeshinka BBC Sports ayaa ka hadlay sababata ka dambeysa bandhigyada Maguire ee xulka Saddexda Libaax isagoo amaan kala duldhacay daafaca kooxdiisii hore.
“Harry Maguire wuxuu u muuqdaa mid ku raaxeysanaya kubbada cagta caalamiga ah, funaanadda Ingiriiska marka uu xiranyahay wuxuu iila muuqdaa buur oo kale, wuxuu lasoo baxayaa kubbadaha wuuna soo qaadayaa baasaska saxda ah ayuuna bixinyaa,” daafacii hore ee United ayaa u sheegay BBC cayaarta kaddib.
“Had iyo jeer wuxuu isku dayayaa inuu soo baxo, qof u keeno kaddibna kubbad ciyaaro waana taas ayaa ah farqiga.”
Lionel Messi Muxuu Sameeyay Kulankii Xalay?